क्यान्डी क्रश खेल - नि: शुल्क Lives सुझावहरू धोखा दिन्छ - क्यान्डी क्रश सागा नि: शुल्क डाउनलोडहरूले धोखा दिन्छ
क्यान्डी क्रश खेल - नि: शुल्क Lives सुझावहरू धोखा दिन्छ
क्यान्डी क्रश सागा नि: शुल्क डाउनलोडहरूले धोखा दिन्छ
क्यान्डी क्रश अनुप्रयोग
क्यान्डी क्रश पसल!
क्यान्डी क्रश धोखा
स्तर 29 मद्दत
स्तर 33 मद्दत
स्तर 65 मद्दत
क्यान्डी क्रश क्यान्डी वर्णन
PC मा क्यान्डी क्रस खेल्नुहोस्
क्यान्डी क्रशका लागि शीर्ष सुझावहरू
हाम्रो टोलीमा सम्मिलित हुनुहोस्
तिमि यहाँ छौ: घर / घर
क्यान्डी क्रश 1532
तपाईं आजको संसारमा सफलता कसरी मापन गर्नुहुन्छ? राम्रो, यो एक साधारण घटना हो यदि एक व्यक्ति सफल छ यदि उसले चिन्ता बिना जटिल कार्यहरू पूरा गर्दछ. तपाईं जटिलताहरू भएको अवस्थाको एक धेरै सामना गर्नुपर्नेछ. तपाईं बस आत्मसमर्पण हुनेछ?? यदि तपाइँ गर्नुहुन्छ, त्यसो भए तपाईले सफलताको मिठो स्वाद लिन सक्नुहुन्न. यो जहाँ खेल हो […]
क्यान्डी नाश स्तर 410 धोखा दिन्छ र सल्लाह
कठिन क्यान्डी क्रश स्तरहरू सबैलाई रमाईलो हुँदैन स्वादिष्टता हुन्छन्. तर त्यसो गर्नेहरूका लागि, हामी निश्चित छौं त्यहाँ धेरै स्तरहरू छन् जहाँ तिनीहरू आनन्दित छन्. जे होस् त्यहाँ त्यहाँ एक गम्भीर र तनावपूर्ण वातावरण छ यी स्तरहरूको वरपर अन्जान चिल्ला र चिच्याई, स्मार्टफोनलाई पिट्दै र पछि यसको लागि जाँच गर्दै […]
क्यान्डी नाश स्तर 419 धोखा दिन्छ र सल्लाह
के तपाई सागर कत्तिको गहिराइमा चकित हुनुहुन्छ?? हाम्रो आकाशगंगा कती ठूलो छ? ब्रह्माण्ड कति विशाल छ? कसरी क्यान्डी क्रश सागाको स्तरहरू हुनेछन्? मेरो मतलब, यो त्यस्तो छैन जस्तो कि हामीले उनीहरू सबैलाई पास गरिसकेका छौं; वास्तबमा, हामी मध्ये धेरै हालको अध्याय भन्दा पछाडि छौं. प्लस साइडमा, […]
क्यान्डी नाश स्तर 1442 धोखा दिन्छ र सल्लाह
क्यान्डी क्रसको ज्वरो छिट्टै घटिरहेको छैन, र जसरी मानिसहरू उच्च स्तरमा पुग्छन्, तिनीहरूको उत्साह बढ्दै जान्छ. यो एक दुष्ट पाश हो तर रमाइलो तरिकामा. कठिन स्तर खेल को एक भाग हो, यसरी हामीले तपाईंलाई क्यान्डी क्रस स्तर दिनको लागि यो टुक्रा बनाएका छौं 1442 धोखा दिन्छ र सल्लाह! एक […]
क्यान्डी नाश स्तर 500 धोखा दिन्छ र सल्लाह
हामी प्रायः खुशीको बारेमा कुरा गर्छौं तर के तपाई कहिल्यै सोच्नुहुन्छ कि यसको अर्थ के हो ? यसको मतलब तपाईले अड्किएको बाधालाई खाली गर्नु हो. क्यान्डी क्रश को मामला मा, प्रयोगकर्ताको खुसीले उनीहरूलाई हानी गर्ने स्तर खाली गर्न सक्छ. धेरै खेलाडीहरू अक्सर गुनासो गर्छन्, जब तिनीहरूaमा अड्किन्छन् […]
क्यान्डी नाश स्तर 437 धोखा दिन्छ र सल्लाह
तपाईं जहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यही बिन्दुमा अड्किएकोमा तपाईं रिसाउनुहुन्छ?? के तपाईलाई लाग्छ कि तपाईको जीवनको लक्ष्य छैन यदि यो लक्ष्य प्राप्त भएन भने? हो, जीवनमा धेरै मानिसहरूको समान भावना हुन्छ यदि तिनीहरू खेलमा एक निश्चित स्तरमा अड्किएका छन्. फलस्वरूप, सफा नगरी खुशी खोज्नु […]
यस संसारमा मानिसहरू छन् जो चुनौतीहरू मन पराउँछन्. उनीहरूले चुनौतीपूर्ण संसारमा तिनीहरूबाट बाहिर निस्केको अनुभव गर्दछन्. तिनीहरूले जटिल स्तर समाधान गर्न सक्ने तरिकाहरू काम गर्नुपर्छ. तथापि, कहिलेकाहीँ प्रयोगकर्ताहरू अड्किन्छन्. पक्कै पनि, यो समय हो जब तपाईंलाई जहाँसुकैबाट सानो मार्गनिर्देशन चाहिन्छ […]
क्यान्डी नाश स्तर 136 धोखा दिन्छ र सल्लाह
के तपाईलाई आफ्नो जीवन रंग कम भएको महसुस हुन्छ? आफ्नो जीवनमा रंग थप्न आवश्यक छ?? ठिक छ यदि तपाईंलाई त्यस्तो लाग्छ भने पहिलो स्थानमा तपाईंले सायद अझै क्यान्डी क्रस खेल्नुभएको छैन. यो रंगीन मिठाई को खेल हो. ती मध्ये केही धारीदार छन्, केहि बेरिएका छन् र केहि मात्र छन् […]
क्यान्डी क्रश जेली सागा
आजको व्यस्त संसारमा, हामीले आफ्नो लागि मात्र पलहरू खोज्न आवश्यक छ, पलहरू जसले जीवनलाई बाँच्न लायक बनाउँछ, क्षणहरू जसले हामीलाई यो व्यस्त धमिलो अवस्थामा समझदार रहन मद्दत गर्दछ जसलाई हामी जीवन भन्छौं. पनि, हामीले क्यान्डी क्रस जेली सागाबाट तपाईका लागि सबैभन्दा सजिलो छुटकारा लिएर आउनु पर्छ. यात्रा क्यान्डी क्रश को बारेमा […]
क्यान्डी क्रश साथीहरू
के तपाईं अझै पनि विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ केही व्यक्तिहरू एक्लो भिडियो गेमहरू योजना गर्छन्? म जस्तो हुँ वास्तविकको लागि? के तपाई १ th औं शताब्दीमा वा के गर्दै हुनुहुन्छ? आजको संसारमा सबै कुरा जडित हुँदा हामी हाम्रा साथीहरूसँग किन जोडिनु हुँदैन? के हामीसँग सधैं तिनीहरूसँग बस्ने समय छ?? वास्तवमा होइन, […]
अन्तिममा अद्यावधिक गरियो जुलाई 16, 2021 द्वारा Isobella फ्रान्क्स एक टिप्पणी छोड्नुहोस्
अन्तिममा अद्यावधिक गरियो अगस्त 10, 2021 द्वारा Isobella फ्रान्क्स एक टिप्पणी छोड्नुहोस्
अन्तिममा अद्यावधिक गरियो अगस्त 4, 2021 द्वारा Isobella फ्रान्क्स एक टिप्पणी छोड्नुहोस्
अन्तिममा अद्यावधिक गरियो नोभेम्बर 11, 2021 द्वारा Isobella फ्रान्क्स एक टिप्पणी छोड्नुहोस्
क्यान्डी क्रश समाचार
क्यान्डी क्रश 4001
क्यान्डी क्रश 1879
क्यान्डी क्रश 1642
क्यान्डी क्रश सागा मोड apk
क्यान्डी नाश स्तर 3914 धोखा दिन्छ र सल्लाह
क्यान्डी नाश स्तर 2229 धोखा दिन्छ र सल्लाह
क्यान्डी नाश स्तर 829 सुझाव र युक्तिहरू
क्यान्डी क्रश स्तर 677 धोखा दिन्छ र सल्लाह
क्यान्डी क्रश सोडा सागा
क्रेडिट | गोपनीयता नीति | सबै अधिकार सुरक्षित © प्रतिलिपि अधिकार क्यान्डी- Cush.co
Candy-Crush.co क्यान्डी क्रशको लागि फ्यान साइट हो. क्यान्डी क्रश सागा किंग.com कर्पोरेशनको एक रेजिष्टर्ड ट्रेडमार्क हो र यस वेबसाइटलाई कुनै पनि हिसाबले किंग डॉट कॉमसँग सम्बद्ध गरिएको छैन। सबै ट्रेडमार्कहरू उनीहरूका सम्बन्धित मालिकहरूको सम्पत्ति हुन्।. सबै अधिकार सुरक्षित.
यस वेबसाइटले तपाइँको अनुभव सुधार गर्न कुकीहरू प्रयोग गर्दछ. हामी मान्दछौं कि तपाईं यससँगै ठीक हुनुहुन्छ, तर तपाइँ चाहानुहुन्छ अप्ट-आउट गर्न सक्नुहुन्छ.स्वीकार्नुहोस् थप पढ्नुहोस्
गोपनीयता & कुकीज नीति
कुनै पनि कुकीहरू जुन विशेष रूपमा वेबसाइटको लागि काम गर्न आवश्यक नपर्न सक्छ र विशेष गरी एनालिटिक्स मार्फत प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत डेटा स collect्कलन गर्न प्रयोग गरियो, विज्ञापन, अन्य इम्बेडेड सामग्रीहरू गैर आवश्यक कुकीजको रूपमा भनिन्छ. तपाइँको वेबसाइटमा यी कुकीहरू चलाउनु अघि प्रयोगकर्ताहरूको सहमति लिन अनिवार्य छ.
बचत गर्नुहोस् & स्वीकार गर्नुहोस्